Umhla My Pet » Ukuthandana Tips For The Shy, Person kunzi-
Ukuthandana Tips For The Shy, Person kunzi-
ukubuyekezwa: UCanzibe. 24 2020 | 4 min ukufunda
Imihla kunokuba nzima bonke kodwa ngokukodwa ukwenzela ukuba uza ngomhla kunye nendoda emangalisayo ngubani ninge nindithanda ngokwenene ukwazi ukanti uneentloni kwaye nzima. Kudla into leyo ngoyaba. Wonke umntu nje icingela ukuba kufuneka bakwazi ukufumana 'ndoda' makroti okanye okanye "mfazi 'kodwa njengomntu ongakuthandiyo kwaye nzima Nam ngokwam ndiyangqina ukuba akuyi kuba lula.
Oku kuneziphako emininzi enjalo, njengoko akaba nako ukumazi umntu, kube ngakumbi buthelezi ngaphezu komnye umntu kuba ngomhla kwaye mhlawumbi uphoswa uxhulumaniso ukuba Ngewenza ukuba wabandululayo lenene niphume. Kunjalo kukho inzuzo kuyo kuba ukuba umntu uyakuthanda ngenene ke baya kwenza imigudu wandule ke ukuba ufuna ngokwenene ukuba. Ngapha koko siphila kwihlabathi kakhulu olukhawulezayo kwaye isantya akuthethi nje kwenzeka kubomi bethu lobungcali. Udla lwela ebomini bethu yobuqu kodwa ukuba umntu uyakuthanda ngokwenene wena aya Akukhathaliseki kuthabatha ixesha elingakanani woo kuwe.
Ndiza kuthetha kwesi intwana into esinokuyenza ukuze siphucule indlela kuza phezu ngomhla kodwa mna phantsi mibono, kwaye andifuni ukuba nabani na ongomnye phantsi nayiphi nokuba, ukuba oku yinkqubo ecothayo ekufuneka abasebenze kwaye akayi kuba ngokuqinisekileyo ngobusuku egqibeleleyo.
Nxiba ukuvakalisa Wena
Le incam leyo kuba bubulumko nayiphi na indoda okanye umfazi ukuya ngomhla naloo eyindoda oh-njalo-kushushu! Kodwa eyona nto ibalulekileyo xa ungumntu oneentloni, umntu kunzi-. Emva sonke ukuvakalisa thina ngeyona nto esizinxibayo nokuba lukhuni okanye demure nangaphezulu yaye ukuba nzima ukunxibelelana nina ngokusebenzisa amagama indlela onxiba ngayo enokusinceda ukuze ngaphesheya le ndoda oko unako ukuthi ngamazwi. Umzekelo ukuba banxiba into ngendlela ome oku ukubonisa ngaphandle esithi nantoni na ukuba fan Lady Gaga okanye ukuba kakhulu ezizenzekelayo fun. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba banxibe indlela ubona wena ucinga ukuba kunjani na umfazi wakhe ofezekileyo okanye umntu sinxiba. Kulula kakhulu ukuba siwele kumgibe. Mna ngokwam. Ngoxa inkampani yabantu endiyenzileyo mna ikho ndandisendinxibele ndiziva ukuba bangathanda ukuba ukunxiba kuba Ndingathanda ndifuna ukuba uthanda kodwa ingozi yokuba kukuba nokuba endinokuyenza ngangani bona angayithandiyo ngenxa kwaye ingakumbi xa ufuna obude kunokwenzeka bekuya kuyacetyiswa ndenze ukuba babone ukuba uthanda ukunxiba kuba emva kwayo yonke loo nto uhlobo isimbo uya enxibe nabo ulwalamano lwakho ubomi.
Thatha isivakalisi ngasinye njengoko ifika
Inxalenye enkulu oneentloni yaye kunzima ukuba overthinking kwaye uva kakhulu ukuba kufuneka uyeke overthinking imeko nje. Kodwa ukuba loo nto kulula ngoko abantu yenze. Overthinking yinto leyo siyamiliselwa umntu kodwa zingaphunyezwa. Oku nje elula njengoko shwaka yonke ngexesha elinye. Kufuneka uyithathe ucotha ngokwemiqathango umhla ukuthatha isivakalisi ngasinye njengoko ifika. Zama ukuba ucinge ngomhla kakhulu kwangaphambili. Zalisa ingqondo yakho kunye nezinye izinto ezifana iikonsathi, ukufunda, TV shows, iifilimu, ixesha elidlulele. Isitshixo nje ukugcina ingqondo yakho kangangoko loo mhla ukuze kangangoko ubuntu bakho xa iphuma ngomhla ngenxa yokuba ungalwenzanga ixesha lokucinga yonke okungakho kwaye kufuneka uphendule njani kwaye kufanele cela.
Cinga nje indlela obuya kuziva Malunga Oku kwiminyaka elishumi
Ndicinga ukuba uya kuziva njani ngento kwiminyaka elishumi yindlela elungileyo kakhulu yokuphonononga ukubaluleka imeko. Zama cinga nokuba kubaluleke kwaye enkulu njengoko nina niyenza phandle ukuba. Yithi wena wenze impazamo, ke ngoku? kuya kuba yinkxalabo enkulu kuwe kweshumi mhlawumbi uya uzilungisile umntu amaphupha akho? Ukuba umntu akakwazi lugqitha iimpazamo ezimbalwa ke ukuba ngenene sifuna ukuba nabo? Ngaphandle kokuba Uza kuba Ndandisoyika kakhulu kwaye mhlawumbi uza kwenza iimpazamo ezimbalwa ngokwabo, ngoko ke malunga eziveleleyo ngawabo kwaye ngethemba baya ngoyaba kokwakho. Akufuni ukuba nomntu rhoqo uchaza kwizinto nina none abanye ukuba. ubuya Zinjani ubomi emva zonke?
Oku kuza kwenzeka ngobusuku. U nokude ezinye iintlekele ukuthandana apho uhlala khona kwaye uthi encinane kakhulu. Kodwa ke konke malunga nenkqubela. Fumana inxaxheba kwizinto ezininzi zentlalo njengoko unako nokuzithemba yakho uthethayo uya kuphucula ngokuhamba kwexesha. Kwaye xa usenza indoda iya kuba khona ukuze umamele ukuba alikhange sele kuza ecaleni bayidiliza ezo iindonga xa ekho ebomini bakho zonke ezi amaxhala wena ukuba liphela njani kuthatha ixesha elide ukufumana umntu kuba akanako ukwenza ukuba uqhagamshelwano ngendlela abanye abonakala lula akayi Akukhathaliseki. Ndiyathanda ke ukuba ngokunyanisekileyo ilungileyo luck.
Indlela Planets ulaziyo Your Love Bya
Ngaba Yokufumana Uthando Lokwenene umxokozelo?
12 Ukutyhutyha Smart ukuze Ukuthandana umxokozelo